Ciidamo Mareykanka ah iyo kuwo Soomaali ah oo weerar ku galay deegaanka Bariirre | Awdalmedia.com
Ciidamo Mareykanka ah iyo kuwo Soomaali ah oo weerar ku galay deegaanka Bariirre
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo Ciidamada xooga dalka ee DANAB iyo kuwo Mareykanka ah ay ka fuliyeen deegaanka Bariirre ee gobolka Sh/Hoose.
Weerarka oo dhacay xalay ayaa waxaa gantaalo lagu dhuftay Saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka, iyadoo ay xigtay Ciidamo dhulka ah oo deegaanka ku daatay, kuwaasoo dagaal fool ka fool ah kula galay dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in weerarka uu guuleystay, isagoo ku faanay in Ciidamada isbaheynsayay ay la wareegeen goobta bartilmaameedka u eheyd.
Barre, ayaa sheegay inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo la gaarsiiyay Al-Shabaab, waloow uu ka gaabsaday inuu si rasmi ah u sheego xadiga khasaaraha ay gaarsiiyeen Shabaab iyo kuwa soo gaaray Ciidamadii Huwanta ahaa ee howlgalka fuliyay.
Waxaa uu sidoo kale sheegay iney la wareegeen Saanad Ciidan oo ay isaga carareen Al-Shabaab, sidoo kalena ay burburiyeen waxyaabaha qarxa oo la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka Shacabka ah, kuwo kamid ah walxaha qarxana Ciidamada ay soo qaateen.
Mareykanka wali kama hadal weerarkan isagoo sare u qaaday weerarada dhinaca Cirka ah ee uu ka fuliyo dalkan, weerarkii u danbeeyay ayaa ah kii 13-aad ee Mareykanka ka geysto dalka, kuwaasoo lala eeganayo xubnaha Al-Shabaab ee dagaalka ka w